धितोपत्रको कारोबार राफसाफ दुई दिनमै हुने ! Bizshala -
धितोपत्रको कारोबार राफसाफ दुई दिनमै हुने !
काठमाण्डौ । दोस्रो बजारमा हुने धितोपत्रको कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्यौट २ कार्यदिनमा हुने भएको छ ।
केही समयअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र कारोबारको राफसाफ कार्यदिन घटाउन नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नेप्सेकी कामु उपप्रबन्धक प्रवीण पन्धाकको संयोजकत्वमा बनाइएको कमिटीले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग बसेको बैठक र लगानीकर्ताहरुको अभिमत लिंदै धितोपत्र कारोबार राफसाफको कार्यदिन २ दिनमा सीमित गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि राफसाफको समय एक कार्यदिनमै गर्नुपर्ने बहस समेत भएको थियो । तर, राफसाफ समय १ दिन अलिक असम्भव भएकोले सबै पक्षको सहमति र सुझावका आधारमा २ कार्यदिन गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको स्रोत बताउँछ । ‘यही हप्ता बस्ने कमिटीको बैठकले सो प्रतिवेदन बोर्डलाई बुझाउने तयारी गरिएको छ।’ बिजशाला स्रोतले भन्यो ।
हाल दोस्रो बजारमा धितोपत्र कारोबार राफसाफ चक्र ३ कार्यदिन रहेको छ । तीन कार्यदिनको चक्रले धितोपत्र र कारोबार रकमको जोखिम यथावत नै रहेका बेला २ कार्यदिनमा झार्दा थप पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।
धितोपत्र बजारमा कारोबार सम्पन्न भए पश्चात् खरिदकर्ताले बुझाउनुपर्ने रकम तथा बिक्रीकर्ताले बुझाउनुपर्ने धितोपत्रको निक्र्यौल गर्ने कार्य नै राफसाफ हो ।